Agaasimaha cusub waaxda Maamulka iyo Maaliyada ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo xilkii kala Wareegay agaasime Waaxdkii hore Maamulka iyo Maaliyada ee Wasaaradda Waxbarashadda iyo Taclinta sare. – Ministry of Education in Puntland
4/7aad/ 2018- Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Maaliyada ee Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntlan Mahad Colaad Maxamed ayaa maanta si rasmi xilkiisi ugala wareegay agaasimihi hore Waaxda Maamulka iyo Maaliyada ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Faarax mixile jaamac ahna Agaasimha Waxaada Maamulka iyo Maaliyada Wasaaradda deegaanka Puntland.
Xaflad xil wareejin ah oo ka dhacay xarunta Waxbarashada ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiir ku xigeenka Waxbarshada iyo Tacliinta sare ee Dowlda Puntland Dr Maxamed Cali Faarax Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare yaasiin Cabdi seed iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta sare Maxamed Cali Faarax (Farmaryeeri) iyo dhaamaan Shaqalaha Wasaarada Waxbarashada iyo Hay’addaha Tageera Waxbarashada.
ugu horayn Waxaa afka shaqalaha ku hadlay Agaasimaha Waaxda Tayeynta iyo Manahijta Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare C/qaadir Yuusuf Nuux.
Waxuu ka hadalay warbixino miisaan leh Shaqaalaha Wasaaradda ka war bixiyey isagoo ka codsaday sidii ay ula shaqeeyeen iyo si ka fiican inay u gacan siiyaan agaasimaha cusub ee ay Wasaaraddu yeelatay, waxaa kale oo uu ka codsaday Hay’adaha ka shaqeeya waxbarshada inay soo dhoweeyaan lana shaqeeyaan nidaamka cusub.
Agaasimihii hore Maamulka iyo Maaliyada ee Wasaaradda waxbarashada Faarax Mixile Jaamac ayaa sheegay inuu meel wanaagsan gaarsiiyay shaqada xafiiska Waaxda Maamulka , wuxuuna intaas ku daray inuu waayo aragnimo badan ka qaatay intii uu la shaqeynayay Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare.
Agaasimaha Waaxeedka Cusub Maamulka iyo Maaliyada ee wasaaradda waxbarashada Mahad Colaad Maxamed ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadaan cusub, isagoo u mahad celiyay shaqada uu qabtay agaasimihii hore, wuxuuna balanqaaday inuu si wanaagsan howshiisa ugasoo bixidoono haddii lagu garab lagusii howshiisa.
Mahad Colaad Maxamed wuxuu sheegay inuu si qadarin iyo xushmad leh ula shaqeyndoona qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeeya Wasaaradda Waxbarashada.
Waxuuna ka dib u Mahad celiyey Madaxweynaha Dawladda Puntland Prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo igu aaminay xilkaan weyn kaas oo labo Wasaaradood oo ka mid ah Wasaaradaha mugga ku leh Puntland iiga dhigay Agaasime waxeed , sidoo kalana wada shaqayn aan hagar lahayn aan kala kulmay.
Waxaa kale oo aan halkaan uga mahad celiyey Agaasimha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland Maxamed Cali Faarax Faramyeeri oo sheegay sida hagar la’aanta ah oo uu iigala shaqeeyay iiguna garab istaagay habsami u socodka Waxbarashada, isagoo mar walba lahaa talooyin joogta ah iyo waayo aragnimadiisa iyo hal-abuurkiisa taasoo keentay inay maanta wasaaraddu higsanayso meel fiican hawlo waaweyna ugu fuleen, waxaa sidoo kale u mahad celinyaa waqtigii fiicnaa uu nala soo qaatay iyo hay’addaha Tageera Waxbarashada sida ugu wanagasan ugala soo shaqeeyey maaliyada faarax Mixile. Ayuu yiri Agaasimaha Guud.
Wasiir Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Yaasiin Cabdi Seed ayaa aad ugu Mahad celiyay hawlihii uu uqabtay mudadii uu xilka hayey Agaasime Waaxeedkii hore ee Maamulka iyo Maaliyada Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare ayaa lahaaa Aqoon iyo khibrad waxbarasho ku ammaanay ina ahaa shaqasi adag oo waxqabad leh, oo jecel horumarka iyo Waxqabadka Dalka.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Dr. Maxamed Cali Faarax ayaa xaflada xil wareejinta ka jeediyay hadalo isugu jira mahad celin agaasimihii hore iyo soo dhowaynta agaasimaha cusub, waxayna ugu dambayn shahaado sharaf gudoonsiiyeen agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada oo lagu ammaanay shaqo wanaagiisii.
By:Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare